I-Serendipity tattoo, fumana yonke into malunga neli gama linomdla | Ukuzoba
Nat Cherry | | Iitattoos ezinobumba
Ungabazi ubundlobongela tattoo, ezo ziqwenga ngokusekwe kwigama elivela kwimbali yakudala yasePersi kwaye oko kubhekisa kwiziganeko ezingenakwenzeka.
Kweli nqaku Siza kuthetha ngentsingiselo yekota kwaye sikunike iimbono ezimbalwa zokukukhuthaza ngokuzayo tattoo. Qhubeka ufunda ukuze wazi ngakumbi!
1 I-Serendipity, igama eline-etymology enomdla
2 Ezinye ze-serendipities ezintle
3 Ezinye izimvo zetattoo
I-Serendipity, igama eline-etymology enomdla
Ngapha koko, igama ubungqingili Yeyangoku, njengoko bekungekho ngo-1754 ukuba inguqulelo yayo yesiNgesi yenziwe, ubungqingili. Yintoni enomdla ngokwenene yimvelaphi yelizwi, kuba isekwe kwimbali yamandulo yasePersi, Iinkosana ezintathu zeSerendip, apho abalinganiswa abaphambili bahlala kohlobo lwe-deus ex machina yamandulo nokusombulula iingxaki zabo ngenxa yemicimbi engakholelekiyo.
Ezinye ze-serendipities ezintle
Kwimeko apho ungacacelwa kuwe ukuba eli gama lithetha ntoni, Nazi izinto ezinobungqina obungakholelekiyo ezinokuthi zibe ngumzekelo:
LI-penicillin yafunyanwa ngengoziXa uAlexander Fleming, owayefunda amasiko ebhaktiriya, wayenenkcubeko engcoliswe ngundo.
Ukufika kukaColumbus eMelika Inokuqwalaselwa kwakhona njengesiqhelo, kuba into awayeyikhangela yayiyi-India.
I-Semachrysa jade, uhlobo lwe-chrysopid engaziwayo kude kube ngo-2011, yafunyanwa kwigalari yeFlickr! Umfoti umfote ngefoto.
Mhlawumbi Ubungqina obunqabileyo obudumileyo kwiminyaka yamuva nje yile ncwadi Amehlo obumnyama, owathi ngo-1981 wathetha ngentsholongwane eyingozi eyakhutshwa eWuhan ngo-2020.
Ezinye izimvo zetattoo
I-Semachrysa jade ifunyenwe ngengozi (Fuente).
Ukuba ngokuqinisekileyo ufuna ukufumana i-tattoo serendipitous, ungakhetha uyilo apho umlinganiswa ophambili elilizwi ngqo ubungqingili. Unokukhetha ifonti ngokuthanda kwakho kwaye uhambe nokuyilwa kwemibala okanye izinto ezincinci.
Ukuba ngokuchaseneyo, ufuna ukufumana uyilo olukhulu, unokukhetha ukukhumbula ubungqingili obudumileyo. Umzekelo, ukubeka umvambo kwibhotile yepenicillin okanye kwiJade yeSemachrysa yimizekelo yobundlobongela obungenakubonwa ekuqaleni.
Siyathemba ukuba eli nqaku kwi-serendipity tattoo linomdla kuwe. Sitshele ukuba unayo iitattoos ezinjalo kumagqabaza!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitattoos ezinobumba » I-Serendipity tattoo, fumana yonke into ngeli gama linomdla
Iitattoo ezithandekayo ezincinci, xa ubukhulu bungenamsebenzi